BAL EEG FARQIGA: N’Golo Kante SHALAY iyo MAANTA…..(Sarri oo Jorginho dartiis u Dilaya Tayada Kante) – Gool FM
BAL EEG FARQIGA: N’Golo Kante SHALAY iyo MAANTA…..(Sarri oo Jorginho dartiis u Dilaya Tayada Kante)
Byare November 26, 2018
(London) 26 Nof 2018. Chelsea ma ahan sida xagaagii hore oo waa xaqiiq in Maurizio Sarri uu wax badan ka badelay qaab ciyaareedkooda balse macalinka reer Talyaani ayaa dilay Tayada N’Golo Kante oo ka mid ah xiddigaha laf dhabarka u ah kooxda.
Macalinkii hore ee Napoli ayaa xiddiga reer France ka badelay booskiisa qadka dhexe ee daafaca isagoona ka dhigay qad dhexe oo weerar ah wuxuuna booskiisa ku aaminay Jorginho.
Leicester City ayaa lama filaan ku qaaday Premier League iyadoo ay daafaca kaga ciyaarayaan Wes Morgan Iyo Robert Huth oo ah labo daafac oo culus da’ ahaana wayn balse waxaa dab xir xoogan u sameynayay kubbad but-buriyaha ugu fiican adduunka ee Kante.
Balse Sarri ayaa iminka ku ciyaaraya tayada Kante waayo ma ahan laacib ka ciyaar qadka dhexe ee Weerarka.
Waa sax in Sarri Iyo Jorginho ay si fiican uga soo wada shaqeeyeen Napoli isla markaana uu ku kalsoon yahay xiddiga reer Talyaani balse cid kasta ayaa aragtay bandhigiisii liitay ee kulankii Tottenham Iyo inuusan ku fiicneyn booska kubbad bur-burinta ee daafacyada ka soo horeeya.
Daafacyada David Luiz Iyo Antonio Rudiger ayaa biyo deys ahaa ciyaartii ay Blues guul darada 3-1 kala kulantay Spurs waxaana ugu wacnaa in Kante uu ka fogaa hareerahooda.
Haddaba waxaa is bar-bar dhig lagu sameeyay Kante kulankii ay Chelsea mininkooda uga soo adkaatay Tottenham sanadkii hore 2-1 Iyo ciyaartii habeen hore ee Blues lagu suul daaray 3-1.
Kante ayaa kulanka sanadkii tagay ka ciyaarayay qadka dhexe ee daafaca ee ah booska uu ku taqasusay taa oo Chelsea ka caawiysay guusha ay gaartay oo 51% wuxuu kubbada ku taabtay dhanka Chelsea halka uu 49% kubbada ku taabtay dhanka Tottenham taa oo ka dhigan inay badneyd howshiisa kubbad but-burinta.
Laakiin ciyaartii habeen hore Xiddiga reer France ayaa weerarka u batay oo dhanka Spurs ayuu kubbada ku taabtay 62% halka uu dhanka kooxdiisa ku taabtay 38%.
Haddaba Sarri ayay iminka talada ka falantaa haddii uu ku sii adkeysan doono inuu Jorginho ka sii ciyaarsiiyo Qadka dhexe ee Daafaca Iyo hadii uu Kante u deyn doono howsha uu ku caanka baxay.
Santiago Solari oo helaya war aad u wanaagsan kahor kulanka Roma ee tartanka Champions League